Tommy's Love Stories: ကျောင်းပုံပြင် - အပိုင်း ၁
“မောင်… ၂ယောက်သား ခဏတွေ.ရတဲ့ အချိန်လေးကို ဘာလို. အဲဒီစာအုပ်တွေကိုဘဲ သဲကြီးမည်းကြီးဖတ်နေရတာလဲ..”
“ဆောရီး သဲ… ကိုယ်ဒီစာအုပ်ကို မနက်ကတည်းက ဖတ်နေတာ ဇာတ်သိမ်းလေးသိချင်လို.၊ ခဏလေးပါကွာ..”
“ဒီကတော့ အိမ်က လူကြီးတွေမသိအောင် မနက်ကတည်းက ကျူရှင်သွားမယ်ဆိုပြီး ခိုးထွက်လာရတာ၊ စားစေချင်လို. မနက်အစောကြီးထ ထမင်းဟင်းတွေ အပင်ပန်းခံချက်လာတယ်.. သူကတော့ တစ်စက်လေးတောင် ဂရုစိုက်ဖော်မရဘဲ သူ.စာအုပ်တွေ အသဲအသန်ဖတ်နေတယ်.. ရည်းစားနဲ့ ချိန်းတွေ.တာ ဘာလို. စာအုပ်တွေသယ်လာလဲ…”
မနေ့ညကမှ စာအုပ်ဆိုင်က ငှားလာတဲ့ တာရာမင်းဝေစာအုပ်လေး သေချာဖတ်ချင်ပါတယ်ဆိုမှ ချစ်သူမရွှေချောက တဂျီဂျီနဲ့ ဂျစ်တိုက်နေလေပြီ…
“အေးပါကွာ…ကိုယ် ဆက်မဖတ်တော့ပါဘူး၊ သဲမျက်နှာလေးဘဲ ထိုင်ကြည့်တော့မယ်..”
“တော်ပါ..ခုမှ” မျက်စောင်းထိုးရင်း ကျေနပ်ပြုံးလေးတချို. သူမမျက်နှာမှာ တွေ.လိုက်ရသည်။
ဒီလိုဆိုတော့လဲ ကျွန်တော့် ချစ်သူက ချစ်စရာကောင်းသွားပြန်သည်။
သူနဲ့ ကျွန်တော်ချစ်ခဲ့ကြတာ ၃နှစ်နီးပါးရှိခဲ့ပြီ။ ဘာပြသနာမှ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် မရှိခဲ့ဖူး။ အဓိက ကတော့ သူမက ကျွန်တော့်ကို အရမ်းချစ်သည်။
ချစ်ပါသည်လို.ဘဲ ပြောရမှာပေါ့။ ချစ်လွန်းလို.ဘဲ ကျွန်တော်တို. ကျောင်းက အချောဆုံး အလှဘုရင်မလေး သဲနု ကို မရရအောင် ပိုးထားရတာလေ…
သဲနုက ချောသည်ဆိုတာထက်ပိုနိုင်သည်။ ကျောင်းမှာ သူ.ကိုလိုချင်လို. ၀ိုင်းဝိုင်းလည်နေသော ယောကျာ်းတွေ ဒုနဲ့ဒေး။ သူမကလဲ တော်ရုံတန်ရုံယောကျာ်းကို အထင်မကြီးတတ်သူ။ ရည်းစားတစ်ခါမှလဲ မထားဖူးသော၊ အရမ်းချောလွန်းလို. ယောက်ျားတကာ ၀ိုင်းအုံနေသော ကောင်မလေးက သော်သော်ဆိုတဲ့ ယောက်ျားရှာလေးကိုကျမှ ရူးရူးမူးမူးချစ်မိသွားတယ်ဆို ခင်ဗျားတို.ယုံမလား။
အမှန်တော့ ကျွန်တော်ကလဲ ခေသူမဟုတ်ပါဘူး။ ၈တန်းကျောင်းသူဘ၀လောက်ကတည်းက အချစ်တော်ကောင်မလေးတွေ ၀ိုင်းဝိုင်းလည်နေခဲ့တဲ့ Tomboy တစ်ယောက်ဘဲလေ။ အခုလို University ရောက်တော့ ပိုကဲလို.ကောင်းသည်ပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ဘဲ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေကြားမှာ နာမည်ကြီးလွန်းတဲ့ သဲနု ကိုတွေ.တော့ ကျွန်တော်လဲ ရင်ခုန်တာပေါ့။
ကံကောင်းတယ်ပြောရမလား၊ ကျွန်တော်က မိန်းကလေးဖြစ်နေခဲ့တော့ သူမကို ၀င်ကပ်ရတာ သာမန်ယောကျာ်းလေးတွေထပ်တော့ လွယ်ကူခဲ့တယ်လေ။ အထူးသဖြင့် ကျောင်းမှာ သူမအတွက် အရင်းနှီးဆုံးဆိုတဲ့ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်မှ မရှိခဲ့လေတော့၊ ကျွန်တော်က အဲဒီရာထူးကို အလွယ်တကူ ဆွတ်ခူးခဲ့နိုင်တာပေါ့။
ဒီလိုနဲ့ဘဲ တစ်ဆင့်တတ်ပြီး၊ ကျွန်တော်တို.၂ယောက် ချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့ကြသည်။
“မောင်… သဲ စကားပြောနေတာကို နားမထောင်ဘဲ ဘာတွေတွေးပြီး ပြုံးနေပြန်ပြီလဲ”
“အာ… မဟုတ်ပါဘူး.. သဲ နဲ့ မောင် နဲ့ စတွေ.တုန်းက အချိန်တွေကို သတိရပြီး ပြန်တွေးနေတာ”
“မညာပါဘူးကွာ။ ကိုယ့်မိန်းမက ချစ်စရာကောင်းလွန်းလို. ဘယ်ကစချစ်ရမလဲ တွေးနေတာ”
ပြောရင်းဆိုရင်း သဲ ကိုပွေ.ချီကာ၊ အိပ်ယာပေါ်တင်လိုက်သည်။
“မောင်နော်..မဆိုးနဲ့ကွာ.. နေ့လည်စာ သွားစားချေ..”
“နေ့လည်စာက ဘယ်အချိန်စားစားရတယ်.. ညနေ ကျူရှင်ပြန်ချိန်မရောက်ခင် အရင်ဆုံး…….”
“မရဘူးကွာ…သဲကို အဲလို အနိုင်မကျင့်နဲ့…လုံးဝမကြိုက်ဘူး.. မောင်နော်… အဲဒါကိုတော့ အလိုမလိုက်နိုင်ဘူး…”
“ဟာကွာ…သဲကလဲ ပြောတော့ ချစ်တယ်ဆိုပြီး…”
“ချစ်တယ်လေ… ဒါပေမယ့် သဲတို. အဲဒီလောက်ထိ နယ်မကျွံသင့်ဘူးလေကွယ်..”
ထိုနေ့က သဲကို ကျွန်တော် စိတ်ကောက်ပလိုက်သည်။ အမှန်တော့ အဲလို စိတ်ကောက်ရတဲ့ နေ့တွေများနေပါပြီ။ ဒါကို သဲကလည်း မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ဘယ်တော့မှ အလျော့မပေး။ နောက်ဆုံးတော့ ကျွန်တော်ဘဲ အရှုံးပေးလိုက်ရတာလေ…
Posted by Tommy Girl at 5:49 AM